Zonke iiVenkile zeApple eFrance zivaliwe ngenxa yomsinga wesithathu we-COVID-19 | Ndisuka mac
Zonke iiVenkile zeApple eFrance zivaliwe ngenxa yomsinga wesithathu we-COVID-19
Iivenkile ezingamashumi amabini anazo iApple eFrance zivaliwe ngenxa yomsinga wesithathu we Covid-19 eye yanda kwilizwe leGallic. Bakwimeko yemida kunye nezibhedlele kumanqam okuwa. Iindaba ezimbi, ngokungathandabuzekiyo.
Kwaye ndithetha iindaba ezimbi hayi kwinkampani, enezixhobo zokunyamezela ukuvalwa ngaphandle kokuchaphazela nakancinci, nangabasebenzi beevenkile, kuba abayi kubandezeleka ngenxa yomsebenzi wabo, kodwa kungenxa yoko kuthetha oko. Besihleli ne-coronavirus eyonwabileyo ngaphezulu konyaka, kwaye akukho ndlela yokuphumelela idabi. Ziindaba ezimbi ezo.
Kwimfazwe yehlabathi eyonwabileyo esisebenza kuyo ngokuchasene ne-coronavirus eyonwabileyo, inomdla kakhulu ukubona ukuba amadabi aphumelela njani kwaye alahlekile ngokuxhomekeke kwindlela amazwe awahlukeneyo ajongene ngayo nobhubhane. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, Europe Uye wabona "ukukhululeka" indlela egcinwe ngayo intsholongwane phantsi kolawulo kunye nezithintelo ezenziwa lilizwe ngalinye ngelixa e-US ubhubhane uhlasela abantu, kunye noTrump ngaphambili.
Ngoku iYurophu ijonge umona eMntla Melika, apho ingaphezulu 50% Inani labemi kunye noqikelelo oluhle, ngelixa silapha kwisigaba sokuqala sokugonywa, ngeedropha, kwaye soyika isandi sesithathu esele sisanda eFrance.
EFransi Okwangoku iphaphile ngenxa yobhubhane, kwaye eminye imimandla ineengxaki ezingqongqo kuneminye. Uninzi lweeVenkile ze-Apple zeli zivaliwe, ngelixa ezinye ezinje ngeApple Champs-Élysées, Apple Opera, Apple Marché Saint-Germain kunye neApple Lille, ziya kuhlala zivulekile kude kube namhlanje NgoMgqibelo, ngo-Epreli 3.
Ngokucacileyo, iApple ayimiselanga umhla wokuvula kwakhona. Yonke into iyakuxhomekeka ekubeni le ndlela yesithathu ye-COVID-19 idlula njani, ethe yanwenwela kumazwe aseGallic. Endaweni yoko, iivenkile ezingama-270 zeapile eMelika zihlala vula, kwaye ngokubona ngesantya esibuhlungu sokuba bonke abantu bayagonywa, kucace gca ukuba abasayi kuphinda bavale. Bayakwenza kuphela ngeholide, njengoko kufanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Zonke iiVenkile zeApple eFrance zivaliwe ngenxa yomsinga wesithathu we-COVID-19
Unganyanzela njani ukwenziwa kwesicelo kwi-Intel eyenzelwe iiMacs ngeM1
Kusemthethweni: UJohn Ternus, usekela Mongameli oyi-Apple kwi-Hardware Engineering